Karim Benzema Oo Xiise U Yeelay Tartanka Gool-dhalinta Horyaalka Spain & Messi Oo Aan Waxba Ka Horreyn | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKarim Benzema Oo Xiise U Yeelay Tartanka Gool-dhalinta Horyaalka Spain & Messi Oo Aan Waxba Ka Horreyn
Karim Benzema Oo Xiise U Yeelay Tartanka Gool-dhalinta Horyaalka Spain & Messi Oo Aan Waxba Ka Horreyn
Tartanka gool-dhalinta horyaalka Spain ee loo yaqaano Pichichi Trophy ayaa xiise yeeshay Sabtidii kaddib markii uu weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema uu laba jeer shabaqa soo taabtay.
Los Blancos ayaa saddex dhibcood oo ay waqti dambe ka heshay Elche waxa ay ugu dhowaatay Atletico Madrid oo hoggaanka haysa, isla markaana lix dhibcood ka horreysa, waxaana labada gool ee guusha siiyey u dhaliyey Karim Benzema.
Xiddiga reer France ayaa waxa uu xilli ciyaareedkan dhaliyey 15 gool oo horyaalka LaLiga Santander oo kaliya ah, waxaana uu ku dhowaaday inuu soo qabto kabtanka Barcelona ee Lionel Messi oo afar gool ka horreeya hadda.
Karim Benzema ku jira kaalinta saddexaad ee tartanka abaal-marinta Pichichi ee gool-dhalinta horyaalka LaLiga, waxaanay isku mid yihiin weeraryahanka Villarreal ee Gerard Moreno, halka Luis Suarez iyo Messi ay yihiin kuwa ay hiigsanayaan.
Lionel Messi oo hoggaaminaya tartanka gool-dhalinta ayaa xilli ciyaareedkan dhaliyey 19 gool, waxaana ku xiga Luis Suarez oo 18 gool dhaliyey.
Karim Benzema ayaa goolashiisu ay ka duwan yihiin dhamaan ciyaartoyda kale ee tartamaysa, waana laacibka kaliya ee aanay goolashiisa ku jirin rikoodheyaal.
19ka gool ee uu Messi dhaliyey, waxa rikoodheyaal ahaa saddex gool, halka Luis Suarez uu isaguna saddex rikoodhe ugu jiraan 18ka gool ee uu saxeexay.
Gerard Moreno ayaa isagana lix rikoodhe ku jiraan 15ka gool ee uu haysto.
Youssef En-Nesyri oo Sevilla afka hore uga ciyaara isla markaana dhaliyey 14 gool iyo Karim Benzema oo kaliya ayaa ah labada ciyaartoy ee gool-dhalinta ku gartamaya iyagoo aan wax rikoodheyaal ah dhalin.
Shanta ciyaartoy ee ugu gool-dhalinta sarreeya horyaalka Spain ee LaLiga:
Lionel Messi (3 rikoodhe ayaa ku jira) Barcelona – 19 gool
Luis Suarez (3 rikoodhe ayaa ku jira) Atletico Madrid – 18 gool
Karim Benzema (Wax rikoodhe ah ma dhalin) Real Madrid – 15 gool
Gerard Moreno (6 rikoodhe ayaa ku jira) Villarreal – 15 gool
Youssef En-Nesyri (wax rikoodhe ah ma dhalin) Sevilla – 14 gool.